မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): အမျိုးသမီးတိုင်း အမျိုးသားတိုင်း ဖတ်သင့်တဲ့စာ ဝေမျှပေးကြ တန်းဖိုးရှိတယ်
ခုနှစ်အလိုက် ရေးသားခဲ့သော စာများကို အောက်ပါလင့်များမှာ နှိပ်၍ ရှာဖတ်ပါ
၀က်ဆိုဒ်ကို နေ့ စဉ်လာတဲ့သူငယ်ချင်းများ အောက်ကပုံလေးကို တစ်ချက်နှိပ်ပေးခဲ့ပါ
နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာနဲ့ ပတ်သက်သောစာအုပ်များကို ကြိုက်နှစ်ရာ ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်၍ရှာပါ
Android ပြုပြင်နည်းစာအုပ်များ Autocad စာအုပ် Computerပြုပြင်ရေးနည်းလမ်းစာအုပ် Cracking နည်းပညာ Facebook နည်းပညာစာအုပ် Flash Song လုပ်နည်းစာအုပ် Miscrosof Office ဆိုင်ရာစာအုပ် Networking ဆိုင်ရာစာအုပ် Photoshop ဆိုင်ရာ စာအုပ်များ Programming ပညာရပ်များ Speaking စာအုပ်များ Wifi Hacking နည်းလမ်းစာအုပ် ခွန်အားရှိသောရသစာပေများ ချက်ပြုတ်နည်း နဲ့ မုန့် လုပ်နည်း ဂီတာတီးခတ်နည်းစာအုပ် စာစီစာရိုက်လက်ကွက်ကျင့်နည်း စာရင်းကိုင်နည်း စာအုပ် တရားစာအုပ်များ နည်းပညာ စာအုပ်များ ဖတ်စေချင်တဲ့စာအုပ်တွေ ဘာသာပြန်စာအုပ်များ မြန်မာ့သိုင်းလေ့ကျင့်နည်းစာအုပ်များ ရုပ်သံ ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်နည်းစာအုပ် လက်ဝှေ့ ထိုးနည်းစာအုပ် သမိုင်းဆိုင်ရာ စာအုပ်များ သုတရသစာအုပ်စုံDownloadယူရန် ဟာသစာအုပ်များ အတ္ထုပ္ပတ္တိစာအုပ်များ ဥပဒေဆိုင်ရာစာအုပ် ဆေးပညာဆိုင်ရာ စာအုပ် မောင်(စွယ်စုံကျမ်း) လမ်းညွှန် နိုင်ငံရေးဖြစ်ရပ်မှန်စာအုပ်
သုတရသစာအုပ်တွေ ယူချင်ရင် အောက်က List မှာ စာရေးဆရာ နာမည်ကိုနှိပ်၍ရှာယူပါ
၀တ္ထုတိုပေါင်ချုပ်စာအုပ်များ ကာတွန်းစာအုပ်များ ကာယဗလ လေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်များ ခင်ခင်ထူး ချက်ပြုတ်နည်း နဲ့ မုန့် လုပ်နည်း ချစ်စံဝင်း ချစ်ဦးညို ချစ်နိုင်(စိတ်ပညာ) ဂမ္ဘီရ၀တ္ထုများလိုချင်ရင် ဂျာနယ်ကျော်မမလေး ဂျူးစာရင်းကိုင်နည်း စာအုပ် စာပေဟောပြောပွဲများ စိမ့်(ပညာရေး) စိုက်ပျိုးနည်း စာအုပ်များ စိုးမြတ်သူဇာ စက္ကောမ ဆန်းလွင် ဆုမြတ်မွန်မွန် ညိုမြ တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် တက္ကသိုလ်စိန်တင် တက်တိုး တင်ထွေး တင်နိုင်တိုး တရားစာအုပ်များ တရားဓမ္မစာပေဆိုင်ရာများ တွတ်ပီ(ဓနုဖြူဆွေမင်း) တာရာမင်းဝေ ဒဿကျော်စွာ နည်းပညာ စာအုပ်များ နီကိုရဲ ပီမိုးနင်း ပုညခင် ဖျာပုံနဒီ ကြည်အေး ဗျူး ဘာသာပြန်စာအုပ်များ မင်းခိုက်စိုးစံ မင်းဒင် မင်းမြတ်သူရ မင်းလူ မင်းသိင်္ခ မိုးတိမ် မြတ်ခိုင် မြသန်းတင့် ရုပ်သံ ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်နည်းစာအုပ် ရဲကောင်းထက် လက်ဝှေ့ ထိုးနည်းစာအုပ် လင်းယုန်မောင်မောင် သခင်မြတ်ဆိုင် သတိုးတေဇ သန်းဝင်းလှိုင် သမိုင်းဆိုင်ရာ စာအုပ်များ ဟာသစာအုပ်များ အတ္တကျော် အတ္ထုပ္ပတ္တိစာအုပ်များ အကြည်တော် အခြေခံကွန်ပျုတာပြုပြင်နည်း ဥပဒေဆိုင်ရာစာအုပ် ဦးကုလား ဦးခင်အောင် ဦးကျော်ဇေယျ ဦးသေားင်းလွင်(ဘီအေ) ဦးနု ကောင်းထက် ကျော်ငြိမ်း ကျော်သူ ဆေးပညာဆိုင်ရာ စာအုပ် တော်ဘုရားလေးအောင်ဇေ နေလင်း(အ.က.သ) ဖေမြင့် မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း) မောင်ညိုမှိုင်း(သံလျင်) မောင်ထွန်းသူ မောင်လှမျိုး(ချင်းချောင်းခြံ) မောင်သန်းဆွေ(ထားဝယ်) မောင်ပေါ်ထွန်း မောင်သော်က အောင်ခင်စိုး အောင်ရင်ငြိမ်း နိုင်ငံရေးဖြစ်ရပ်မှန်စာအုပ်
အမျိုးသမီးတိုင်း အမျိုးသားတိုင်း ဖတ်သင့်တဲ့စာ ဝေမျှပေးကြ တန်းဖိုးရှိတယ်
ဆရာအတ္တကျော်ရဲ့ စာတွေကို ဖေ့ဘွတ်မှာတွေ့ လို့ ဝင်ဖတ်ရင်း အခုလိုအားလုံး
သိအောင် ထပ်ဆင့်မျှဝေပေးတာပါ မူးရင်းရေးသာသူမဟုတ်ပါ နမူနာစာအဖြစ်
ဖတ်ဖို့ ကူးယူ၍ကြော်ငြာပေးခြင်းဖြစ်ပီး နောက်ပိုင်းစာတွေကို ဆရာ့ဆီမှာဖတ်
သေချာတယ်.... ရောက်တဲ့လူတွေကတော့ ဆရာ့ဆိုဒ်မှာ ပြန်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ 
အာမခံပါတယ် လွန်ခဲ့သော2နှစ်ကြာခဲ့ပါပြီ ။ ခုမှစသိတာတွေ့ တာ နောက်ကျ
လိုက်တာနော..အဲ့လိုမဖြစ်အောင် အခုလိုအားလုံးအကျိုးရှိတဲ့စာ အသုံးတဲ့မယ့်
၀က်ဆိုဒ်တွေကို ဒီစာဖတ်မိသူတိုင်းကနေ များများ လှုံ့ ဆော်ဖြန့် ဝေပေးပါလို့ 
ဘလော့ဂါအားလုံးနှင့်စာဖတ်သူတို့ အား လေးစားခင်မင်လျှက်-
သမီးက ဆရာ့ပရိတ်သတ်ပါ။ သမီးနာမည်က နှင်းဝင့်ဖြူပါဆရာ။ မိတ္ထီလာမြို့မှာ နေပါတယ်။ အသက်က ၂၀ ပါ။
သမီးရင်ထဲမှာ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်လွန်းလို့ ဆရာ့ကိုပဲ ရင်ဖွင့်ပါရစေ။
သမီးလူတွေကို ပြောလည်းပြောချင်တယ်။ အရှက်ကွဲမှာလည်း အရမ်းကြောက်နေလို့ပါ။ သမီးမှာချစ်သူ တစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ ဘာမှ လွန်လွန်ကြူးကြူး ဖြစ်မထားပါဘူး။ တစ်နေ့ သမီးတို့နှစ်ယောက်မှာ ပြဿနာတွေ နည်းနည်း ရှိလာတယ်။ အဲ့ဒါသမီးလည်း စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ ဗေဒင် သွားကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီ့ဗေဒင်ဆရာအကြောင်းကို သေချာပြောပြပါရစေ။ သူက မိန်းမ နှစ်ယောက် ယူခဲ့ဖူးပြီး နှစ်ယောက်စလုံး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ သူ့မှာ သားတစ်ယောက်တော့ ရှိပါတယ်။ အခု သူ ယူထားတဲ့ မိန်းမက ဘဏ်တစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်ပြီး သူ့ထက် အရမ်းငယ်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံတွေ ပုံပြီး တင်တောင်းထားတာပါ။ အားလုံးရဲ့ရှေ့မှာ
သူဟာ လူကြီး လူကောင်း ပုံစံနဲ့ နေပါတယ်။ တစ်ခုတော့ ရှိတယ်ဆရာ။ သူက ဒုတိယ မိန်းမ သေပြီး မကြာဘူး၊ နောက်တစ်ယောက်ကို ယူလိုက်တာပါ။ အဲ့ဒီ့ ဗေဒင်ဆရာက သမီးတို့မြို့မှာ လူကြီးလူကောင်းတွေ၊ ရာထူးကြီးကြီးလူတွေကအစ ကိုးကွယ်တဲ့ဆရာပါ။ သမီးလည်း အရမ်း သိက္ခာရှိတဲ့ ဗေဒင်ဆရာလို့ ထင်ခဲ့မိပါတယ်။
သမီးတို့တွေ ဗေဒင်ခန်းထဲကို တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက်ပဲ ၀င်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ သမီးအလှည့် ရောက်တော့ သူက ပြောပါတယ်။ သူ ဟောသမျှကို ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောရဘူးလို့ သစ္စာ ဆိုခိုင်းပါတယ်။ နောက်ပြီး သမီးနဲ့သမီးချစ်သူ ကိစ္စတွေကို အတွင်းကျကျ ဟောပါတယ်။ ဟုတ်တာလည်း ပါတယ်။ မဟုတ်တာလည်း ပါတယ် ဆရာ။ ဒါပေမယ့် သမီးကတော့ အားနာပြီး ဟုတ်ကဲ့ပဲ ပြောနေလိုက်မိတယ် ဆရာရယ်။
သူက ပြောပါတယ်။ သမီးစိတ်က ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ အတူတူ နေချင်နေတာတဲ့။ အဲ့ဒါသမီးက ကိုယ်ဝန်ရမှာ၊ ရောဂါကူးမှာတွေ ကြောက်နေတာတဲ့။ အဲ့ဒါ အဲ့ဒီ့လိုတွေ မဖြစ်အောင် သူ သင်ပေးမယ်တဲ့ဆရာ။ ဒါပေမယ့် သူ ပြောတာတွေကို ဘယ်သူ့မှ မပြောရဘူးတဲ့။ သူ ဒီလိုပြောတာတွေက တဏှာစိတ်ကြောင့် မဟုတ်ဘူးတဲ့ ဆရာ။ သမီးဘ၀ တိုးတက် ကောင်းမွန်အောင်၊ မိဘက ချစ်အောင်၊ သမီးချစ်သူက သမီးကို တန်တန်းစွဲ ဖြစ်နေအောင်လို့တဲ့။ နောက်ပြီး
သမီး ခန္ဓာကိုယ်ကို သူ့ကို လှူလိုက်ပါတဲ့။ သူ့လို မြင့်မြတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က သမီး ခန္ဓာကိုယ်ကို ယူထားမယ်ဆိုရင် တခြား ဘယ်သူမှ သမီးကို မစော်ကားရဲတော့ဘဲ
သမီးကလည်း ဒီလောက်တောင် ကိုးကွယ်သူတွေ ပေါများနေတဲ့ အဲ့ဒီ့ဆရာ ပြောသမျှကို ယုံမိပါတယ်။ သမီး အသုံးမကျတာပါဆရာ။ သမီးက ဆရာအတ္တကျော်လိုမျိုး စေတနာနဲ့ လမ်းပြပေးမယ့်သူလို့လည်း တွေးခဲ့မိပါတယ်။ အဲ့ဒါ သူက သမီးကို ယတြာချေဖို့ ချိန်းပါတယ်။ အဲ့ဒီ့မှာ သူက ပြောတယ်ဆရာ။ သမီးဆီက အရည် လိုချင်တယ်တဲ့။ အဲ့ဒါ သူ့ကို ပေးဖို့ တောင်းပါတယ်။ သမီးအရည်ကို သူမျိုချရဲတယ်တဲ့။ အဲ့ဒါနဲ့ သူ့အခန်းထဲကို ခေါ်ပြီး သမီးကို အ၀တ်အစား ချွတ်ခိုင်းပါတယ်။ နောက်ပြီး သမီးအောက်ပိုင်းကို နမ်းတော့တာပဲဆရာ။
သမီး ကြောက်လည်း ကြောက်။ ရှက်လည်း ရှက်ပါတယ်။ သူက ပြောပါတယ်။ ဘယ်ယောက်ျားမှ သူ့လို အောက်ကျခံပြီး ဒီလို နမ်းမှာ မဟုတ်ဘူးတဲ့။ အဲ့ဒါ သူ့လိုလူကတောင် နမ်းတယ်ဆိုရင် ယောက်ျားတွေကို သမီး နိုင်ပြီတဲ့။ ဒါပေမယ့်ဆရာ သူက အဲ့ဒီ့လောက်နဲ့တင် မပြီးဘူး။ သမီးကိုလည်း သူ့ရဲ့လိင်တံကို စုပ်ခိုင်းပါတယ်။ သမီးက မလုပ်ချင်ဘူးဆိုတော့ သူက “ဟဲ့…ငါက အကြောင်းရှိလို့” ဆိုပြီး ဇွတ်လုပ်ခိုင်းပါတယ်။ သမီးလည်း မယုံတစ်ဝက်ယုံတစ်ဝက်နဲ့ သူ လုပ်ခိုင်းသလို လုပ်ခဲ့ရတယ်။ သမီးလုံးဝကို မသတီဘူး ဆရာ။ အရမ်း ရွံတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အားလုံးက လေးစားရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကအကြောင်း မရှိဘဲနဲ့တော့ သမီးကို လုပ်ခိုင်းတာ မဟုတ်ဘူးဆိုပြီး ထင်ခဲ့မိတယ်။
နောက်တော့ သူ သမီးကို စော်ကားလိုက်တာပါပဲ ဆရာရယ်။ သမီး အရမ်းလည်း ရှက်ပါတယ်။ သူ ပြောတာက ယောက်ျားခန္ဓာကိုယ်က ထွက်တဲ့အရည်ကို ပြချင်လို့ ဆိုပြီးတော့ပါ။ အဲ့ဒါ ထွက်လာတဲ့ သုတ်ရည်ကို ပြပါတယ်။ အဲ့ဒီ့အရည် မ၀င်ရင် ကိုယ်ဝန်မရနိုင်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ အခုချိန်ကစပြီး သမီးချစ်သူကလည်း သမီးကို
တန်းတန်းစွဲဖြစ်ပြီး ယောက်ျားတွေကိုလည်း နိုင်တော့မယ်လို့ ပြောပါတယ်။
သူ့ကို မယုံဘူးလားတဲ့။ သူက အားလုံးက လေးစားရတဲ့ ဆရာတဲ့။ အဲ့ဒါကြောင့် အခုလို သမာဓိရှိရှိ ရပ်တည်နိုင်တာတဲ့။ သမီးကိုလည်း သူ့ဇနီးမယားအဖြစ် မွေးစားလိုက်ပြီလို့ပြောတယ်။ သမီးကို ကောင်းစေချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တဲ့။ အပျိုရည်လည်း မပျက်ဘူးတဲ့။ အမြှေးပါးလည်းပျက်စီးသွားတာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောတယ် ဆရာရယ်။
သမီးလည်း ဘာမှ မသိတော့ဘဲ ပြန်လာခဲ့မိပါတယ်။ သမီး ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း မပြောဖူးပါဘူး။ နောက်တစ်နေ့ သူငယ်ချင်းတွေ ဆုံတဲ့အခါ သူတို့တွေက ပြောပြကြပါတယ်။ ဗေဒင်ဆရာက စိတ်အခြေအနေ ဟောတာတော့ မှန်ပါတယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် မကောင်းဘူးလို့ သူတို့က ပြောပါတယ်။
အဲ့ဒါနဲ့ သမီးလည်းသူ့တို့ကို မေးကြည့်ပါတယ်။ သမီးတို့တွေချင်းတော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ ပြောကြပါတယ်။ အဲ့ဒီ့ဗေဒင်ဆရာက သမီးသူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း
ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောရဘူးလို့ ပြောထားတာတဲ့။ သူငယ်ချင်းတစ်ယာက်ကိုကျတော့ သူရဲ့အောက်ပိုင်းမှာ မှဲ့ရှိတယ်ဆိုပြီး ပြခိုင်းပါတယ်။ သူက လိုအပ်လို့ ကြည့်တာ ဆိုပြီးတော့လေ။ နောက်ပြီး ဘုရားခန်းကြီးထဲမှာ ဆရာ။
နောက်ပြီး သမီးကို ပြောသလိုပဲ လျှောက်ပြောတယ်တဲ့။ သမီးသူငယ်ချင်းကလည်း သမီးလိုပဲ ဒီလိုမျိုး သိက္ခာရှိတဲ့ ဗေဒင်ဆရာက မကောင်းတာတော့ မလုပ်လောက်ဘူးဆိုပြီး ပြလိုက်တယ်တဲ့ ဆရာရယ်။ နောက်တစ်ယောက်ကျတော့ ရင်ဘတ်မှာ မှဲ့ရှိတယ်ဆိုပြီး ပြခိုင်းတယ်တဲ့။ သူလည်း အဲ့ဒီ့လိုပဲ လုပ်မိပြန်တယ်။
သမီး အရမ်းကိုလန့်သွားမိပါတယ်။ သမီး ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ သူတို့ကို မပြောပြရဲဘူး ဆရာ။ နောက်တစ်ခု ပြောရအုံးမယ် ဆရာ။ သူက သူ့တံတွေးကိုလည်း မျိုခိုင်းသေးတယ်။ သမီးကိုရော။ သမီးသူငယ်ချင်းတွေကိုရော။
သမီး အရမ်းစိတ်ညစ်တယ်ဆရာ။ သမီး အပျိုမစစ်တော့ဘူးပေါ့နော်။ သမီး ရောဂါတွေ ဘာတွေ ရမှာလည်း ကြောက်တယ် ဆရာ။ အခု နေရင်းထိုင်ရင်းတောင် HIV
ပိုးများ ၀င်နေသလားဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လန့်နေမိတယ်။ သုတ်ရည်မ၀င်ပေမယ့် oral sex လုပ်ရင်လည်း ရောဂါကူးတယ် မဟုတ်လား ဆရာ။ သမီး သွေးလည်း သွားစစ်ချင်တယ်ဆရာ။
သမီး ဘာတွေ လုပ်ဖို့ လိုအပ်သလဲ ဆရာ။ အခုဆိုရင် စိတ်ဆင်းရဲလွန်းလို့ အိမ်ထဲက အိမ်ပြင်တောင် မထွက်ချင်တော့ပါဘူး။ ကိုယ့်အဖေအရွယ် လူတစ်ယောက်ရဲ့
စော်ကားမှုကို ခံရတာပါဆရာရယ်။ သမီးချစ်သူအပေါ်လည်း အပြစ်လုပ်မိသလို ခံစားရတယ်။
သမီးချစ်သူက အလွန်ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့သူပါ။ သမီးကိုလည်း ဘာမှ အမှားအယွင်းမရှိအောင် နေတတ်သူပါ။ အခုတော့ သမီးမှာ တစ်ခြားမိန်းကလေးတွေနဲ့ တန်းတူ မဖြစ်သလို ခံစားနေရပါပြီ။ သမီး အသုံးမကျလို့ ဖြစ်မှန်းသိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အားလုံးက လေးစားရတဲ့ နာမည်ကြီး ဆရာတစ်ဆူက အဲ့ဒီ့လို မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့
တကယ်ဆို သမီး သူ့ကို တရားစွဲပစ်ချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဆရာ။ သမီးပဲ အရှက်ကွဲမှာလေ။ သမီး ဘာလုပ်ရမှန်းကို မသိတော့ပါဘူးဆရာရယ်။
အခုလိုရေးရင်းနဲ့တောင် သမီလန့်မိတယ်။ သမီးကို အောက်လမ်းနည်းတွေ ဘာတွေ သုံပြီး မကောင်းကြံမှာ ကြောက်တယ်ဆရာရယ်။
သမီးလေ သူတစ်ပါး သားမယားအပေါ် ကျူးလွန်ရာ ကျနေပြီလားဆရာ။ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံ ထိုက်နေပြီလားဟင်။ ဘယ်လို ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေ ခံယူရမလဲဟင်။
သမီးချစ်သူကို ဖွင့်ပြောသင့်သလား။ အရမ်းကို သွေးပျက်ချောက်ချားနေလို့ပါ။
စိတ်ဆင်းရဲလွန်းလို့ သမီးဘာဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတာ ဆရာ အမြန်ဆုံးညွှန်ကြားပေးပါနော်။
သမီးရဲ့စာကို နာမည်နဲ့၊ နေရပ်လိပ်စာ မလှီးလွှဲဘဲနဲ့ မဂ္ဂဇင်းတစ်ခုခုမှာ ဖော်ပြပေးပါ။ နာမည်က သူနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက် နာမည်မိုလို့ပါ။
မြို့ကို ဖော်ပြထားမှ သမီးတို့မြို့က လူတွေ သိကြမှာဆရာ။ သမီးမှာ ဆရာ့ကိုပဲ အားကိုးစရာ ရှိပါတော့တယ်။
“သားငယ် သမီးငယ်များ ပဲ့ပြင်ထိန်းကျောင်းခြင်းအနုပညာ”
“နေပျော်တဲ့ဘ၀ ကြည်မြတဲ့ ဘ၀င် ရွှင်လန်းတဲ့စိတ် (မောဟပြေ ပုံတိုပတ်စများ ၁) “
“ထိမ်းမြားပေါင်းဖက် ရန်ဖြစ်လျက်ပင် ချစ်ကြင်နေနည်း”
မူရင်းဆိုဒ်ကိုသွားဖြစ်အောင်သွားပါ - www.nookycontent.wordpress.com
Author Anonymous at 2:28:00 AM
Labels: ဖတ်စေချင်တဲ့စာအုပ်တွေ, သိသော်ဖော်သွား မသိသူကြော်စား
Root လုပ်နည်း နဲ့ မြန်မာစာထည့်နည်းမျိူးစုံ ဖတ်ရန်
Android App ဆော့ဝဲ ရေးသားနည်း
Android ဖုန်း မြန်မာစာထည့်နည်း
Lenovo ဖုန်း Root လုပ်နည်း
Lenovo ဖုန်း မြန်မာစာ ထည့်နည်း
Nokia ဖုန်း မြန်မာစာ ထည့်နည်း
Phone မျိုးအတွက် Firmware တင်နည်း
Phone မျိူးစုံအတွက် Root လုပ်နည်း
Phone အတွက် တိုင်းရင်းသား Font နဲ့ ကီးဘုတ်များ
Root ပြီးသားဖုန်း Un-Root ပြုလုပ်နည်း
Mobile Phone ဆိုင်ရာ ဆော့ဝဲများ Donload ယူရန်
Andriod Error Solution (3)
Android Application (11)
Android Camera APK (12)
Android phone နှင့်Computer Internet ချိ်တ်နည်း (2)
Android နည်းပညာများ (11)
Android ဖုန်း မြန်မာစာထည့်နည်း (15)
Android ဖုန်းမှာ ရှိသင့်တဲ့ဆော့ဝဲ (41)
Android ဖုန်းမှာ ရှိသင့်တဲ့ဆော့ဝဲ (13)
Android ဖုန်းအတွက် Auto Answer ဆော့ဝဲ (2)
Android ဖုန်းအတွက် Keyboard (9)
Android ဖုန်းအတွက် Reader (2)
Android ဖုန်းအတွက်မြန်မာ့ ဂိမ်း (2)
Android ပြုပြင်နည်းစာအုပ်များ (3)
Android အတွက် Google Earth (3)
Android အလန်းဇယား Launcher (4)
Backup APK (2)
Design ဆွဲတဲ့ ဆော့ဝဲများ (2)
Firmware တင်နည်း (8)
Firmware မျိူးစုံ Download (5)
Funny Talk apk (3)
Huawei ဖုန်းအတွက်နည်းပညာများ (6)
Huawei မြန်မာစာထည့်နည်း (4)
Office Apk (4)
Online TV Player (7)
Online Webcam (2)
Pattern Lock ပြဿ နာဖြေရှင်းနည်း (2)
pc viber myanmar font (4)
Phone Battery ပြဿနာ (13)
Phone ကနေ Download ယူနည်း (15)
Phone ထဲကနေ MP3-4ပြောင်းနည်း (2)
Phone နဲ့ သက်ဆိုင်သော (5)
Phone မှ Wifi ကို ခွဲသုံးနည်း (2)
Phone မှာ Error တက်လျှင်ဖြေရှင်နည်း (2)
Phone မှာ Snapshot ရိုက်နည်း (3)
Phone မှာ ရှိနေသင့်တဲ့ဆော့ဝဲ (2)
Phone မျိုးစုံအတွက် Games (66)
Phone မျိုးအတွက် Firmware တင်နည်း (8)
Phone အင်တာနက်လိုင်း မြင့်နည်း (3)
Phone အတွက် Anti Virus (7)
Phone အတွက် Bank ဆော့ဝဲ (2)
Phone အတွက် Call Blocker (2)
Phone အတွက် Cleaner (10)
Phone အတွက် Facebook (2)
Phone အတွက် Keyboard (4)
Phone အတွက် Photoshop ဆော့ဝဲ (36)
Phone အတွက် Player (14)
Phone အတွက် Speaker apk (3)
Phone အတွက် TeamViewer (1)
Phone အတွက် Video Editor (9)
Phone အတွက် Virus ဆော့ဝဲ (5)
Phone အတွက် Wallpaper (25)
Phone အတွက် Win Rar (1)
Phone အတွက် ပန်းချီရေးဆွဲနည်း (2)
Phone အတွက် မြန်မာပြက္ခဒိန် (8)
Phone အတွက် မြန်မာလိုဆော့ဝဲ (11)
Phone အတွက် ဟာသ ဆော့ဝဲ (2)
Phone အတွက် အသံဖမ်းဆော့ဝဲ (4)
Phone အတွက် အကောင်းဆုံး Camrea (2)
Phone အတွက် ဗေဒင်ဆော့ဝဲ (3)
Phone အတွက် နှစ်ကိုယ်ခွဲဆော့ဝဲ (2)
Phone အတွက်မြန်မာအဘိဓာန် (14)
Phone အတွက်မြန်မာဖောင့် (19)
Phone အလန်းဇယား Rington (9)
Phone လေးလာရင်မြန်စေဖို့(9)
Photo Slideshow Maker Apk (5)
Photo ဒီဇိုင်းပြင်ချင်ရင် (2)
Printer Driver (3)
Printer ပြဿနာများ (3)
Root လုပ်နည်း (6)
Screen Recoder (3)
Typing Software (4)
Useful Apk (30)
Youtube မှ Download ယူနည်း (6)
ဓာတ်ပုံပေါ် မြန်မာစာရေးချင်ရင် (6)
ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပျုတာ Wifi ချိတ်နည်း (4)
ဗုဒ္ဓ တရား ဓမ္မဆိုင်ရာ ဆော့ဝဲများ (11)
မြန်မာဘာသာနဲ့ မြန်မာ Games (4)
မြန်မာဖောင့်မမှန်ရင် ဖြေရှင်းနည်း (12)
သီချင်းစီးရီးတစ်ခုလုံး Down ရန် (2)
အကြိုက်ဆုံး မြန်မာဇာတ်ကား (9)
အကြိုက်ဆုံး နိုင်ငံခြားက (5)
iPhone-iPad (ios) ဆိုင်ရာ နည်းပညာများ
Apple ( iTunes )ID ဖွင့်နည်း
Apple ID ပြဿ နာဖြေရှင်းနည်း
i-Phone Reset ပြုလုပ်နည်း
i-Phone ကနေ Wifi ထပ်ဆင့်လွှင့်နည်း
i-Phone ကနေDownload ယူနည်း
i-Phone ဆိုင်ရာ စာအုပ်များ
i-Phone မှာ Backup ယူနည်း
i-Phone အတွက် ID ဖွင့်နည်း
i-Phone အတွက် Screen Recorder
i-Phone အတွက် Slide Show Maker
i-Phone အတုအစစ် စစ်ဆေးနည်း
iPhone Carrier နာမည်ပြောင်းနည်း
iPhone Jailbreak လုပ်နည်းများ
iPhone အတွက် Photoshop များ
Iphone အတွက် စာအုပ်ဒေါင်းနည်း
Safari မှာ မြန်မာစာထည့်နည်း
Facebook နှင့်ဆိုင်သော နည်းပညာများ
Account ကို အပြီးဖျက်နည်း
Facebook Block လုပ်နည်း၊ ဖြုတ်နည်း
Facebook နာမည် မြန်မာလိုပြောင်းနည်း
Facebook Lock ဖြည်နည်း
Facebook ဆိုင်ရာ နည်းပညာများ
Facebook ရဲ့ သတင်းထူး
Facebook သို့ Auto ပိုစ်တင်နည်း
Facebook အကောင့် ဖွင့်နည်း
Fan Page လုပ်နည်း
Friend List ဖျောက်ထားနည်း
Lock မကျအောင် သုံးနည်း
ကိုယ့် Profile ဘယ်သူအကြည့်များလဲစစ်နည်း
Online မြန်မာ Dictionary
Eng-Mya by(ko soe min)
Online Eng to Myan
အင်္ဂလိပ် - မြန်မာ အဘိဓာန်
ကဗျာဆရာတို့ ၏ ရင်တွင်းဖြစ်ကဗျာများ
*M.H.A* ရေးသော ကဗျာတိုများ (6)
Cinthi ရေးသော ကဗျာများ (14)
MAYKO ရေးတဲ့ ကဗျာများ (8)
ပုံရိပ်ယောင်ရေးတဲ့ ကဗျာများ (4)
ပုသိမ်သား ၏ ကဗျာများ (3)
မမမေ (စစ်တွေ) ရေးတဲ့ကဗျာများ (3)
မိန်နွေ ရေးတဲ့ကဗျာများ (8)
ရင်ထဲထိတဲ့ သူတို့ ကဗျာ (22)
ရဝေသစ်(မြတမာ)၏ ကဗျာများ (15)
လွမ်းဝေအောင် ရေးတဲ့ ကဗျာ (6)
သိုက်ကြီး( က.ပ.တ )၏ကဗျာများ (30)
အိအိကျော်ဇင် ရေးတဲ့ ကဗျာများ (2)
တေးတေး ရေးတဲ့ကဗျာ (8)
လေလွင့်လူ၏ ကဗျာများ (27)
My- Goal ဘောလုံးသတင်း
7Day News ဂျာနယ်
VCD / MP3 သီချင်းများယူရန်
သီချင်းအိမ် VCD/MP3 မျိုးစုံ
Myanmar Mp3 Album
စွယ်စုံ အထွေထွေ ဗဟုသုတ (17)
သင်္ကြန်သီချင်းများ စုစည်းမှု (4)
သိသော်ဖော်သွား မသိသူကြော်စား (11)
ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဆေးနည်းမျိူးစုံ ဖတ်ရန်
အစာ အိမ် ရောဂါ
အသည်း C ပိုး B ပိုး ပျောက်ဆေးနည်း
သွေးလွန်း တုပ်ကွေး ရောဂါ
Computer ၀ယ် လျှင် ဖတ်ရန်
Computer Cleaner ဆော့ဝဲများ
Computer Error ဖြေရှင်းနည်း
Computer Webcam ဆော့ဝဲ
Computer Window တင်နည်းများ
Computer မှာ Copy မြန်တဲ့ဆော့ဝဲ
Computer မှာ ပုံရိုက်တဲ့ဆော့ဝဲ
Computer မှာသုံးဖို့ အဘိဓာန်
Computer အတွက် Player စုံ
Computer အတွက် Android Manager
Computer အတွက် Anti Virus
Computer အတွက် Converter ဆော့ဝဲ
Computer အတွက် Games
Computer အတွက် Google Earth
Computer အတွက် Recovery ဆော့ဝဲ
Computer အတွက် Screen Recoder
Computer အတွက် Speaking ဆော့ဝဲ
Computer အတွက် Uninstaller
Computer အတွက် ပြက္ခဒိန် နဲ့ နာရီ
Computer အတွက် အသံဖမ်းဆော့ဝဲ
Computerမှာ သိထားရမယ့် အချက်များ
Cyper Link Power Director
Download Software နဲ့လုပ်နည်း
Driver အကြောင်းနဲ့Driver များ
IP location Hider
pc viber myanmar font
PDF Book Creater
PDF Book Reader
Registery ပြသနာ နဲ့ ဆော့ဝဲများ
Softwere install ပြဿနာများ
USB STICK LOCKER
Virus ၀င်လျှင် ဖြေရှင်းနည်း
win Rar ၏အသုံးဝင်မှုများ
Win Rar 32bit and 64 bit
Window7၏ အားသာချက်
Window 8 ဆိုင်ရာ
Window Desktop Gadges
Window Genuine ဖြေရှင်းရန်
Youtube မှ Download ယူနည်း
Zawgyi Font ပြဿနာဖြေရှင်းရန်
ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ရေးနဲ့Anti Virus
မှားဖျက်တာပြန်ရှာဖို့ Data Recovery
လိပ်စာ Name ကဒ်လုပ်နည်း
Mozilla Firefox ဆိုင်ရာပညာ (13)
PDF Book Creater (8)
PDF Book Reader (4)
Zawgyi Font ပြဿနာဖြေရှင်းရန် (14)
စာစီစာရိုက်နှင့် Miscrosoft Office (17)
စာရင်းကိုင်နည်း စာအုပ် (2)
လိပ်စာ Name ကဒ်လုပ်နည်း (2)
Photoshop ပညာရပ်နှင့် ဒီဇိုင်းပညာများ
Photo Slideshow လုပ်နည်း (11)
Photoshop ဆိုင်ရာ စာအုပ်များ (20)
Photoshop နှင်ဒီဇိုင်းပညာများ (12)
Photoshopဆိုင်ရာ ဆော့ဝဲများ (15)
ဓာတ်ပုံ ပြင်ဖို့Frame ဒီဇိုင်းများ (11)
ဓာတ်ပုံကို အရှင်ဖြစ်အောင်လုပ်နည်း (1)
ဓာတ်ပုံကို ခေါင်းဖြတ်ဆက်တဲ့ဆော့ဝဲ (5)
ဖိတ်စာ၊လိပ်စာ ဒီဇိုင်းကဒ်လုပ်နည်း (6)
မျက်နှာကိုအသေးစိတ်လှအောင်ပြင်ဖို့(5)
ပြက္ခဒိန်ဒီဇိုင်းနှင့် ပိုစ်ကတ်လုပ်နည်း (1)
အလန်းဇယား PhotoShop ဒီဇိုင်း (14)
MP3/MP4နဲ့ Video Edition ပညာ
Computer အတွက် Converter ဆော့ဝဲ (5)
Computer အတွက် အသံဖမ်းဆော့ဝဲ (2)
Cyper Link Power Director (6)
Mp3/Mp4 စွယ်စုံ Converter ဆော့ဝဲ (3)
Nero 8 ၏ အသုံးဝင်မှု (4)
VCD-DVD-Burning ဆော့ဝဲများ (24)
Account ပြဿနာများ (1)
Blog Setting ပြင်နည်းများ (3)
IP location Hider (3)
Template ဒီဇိုင်းလှလှများ (4)
Website နဲ့Blog နည်းပညာများ (30)
ဘလော့ ပြဿနာများ (6)
ဘလော့ လုံခြုရေးနည်းလမ်း (3)
ဘလော့မှာ Like Box ထည့်နည်း (1)
ဘလော့အလှဆင်နည်းနဲ့wedgets (69)
Account ကို အပြီးဖျက်နည်း (2)
Download Software နဲ့လုပ်နည်း (14)
Google Chrome ဆိုင်ရာပညာ (1)
Internet Download Manager (4)
Flash Song လုပ်နည်းဆိုင်ရာ နည်းပညာ
Flash Song လုပ်နည်းစာအုပ် (2)
Flash Song လုပ်နည်းနဲ့ဆော့ဝဲများ (6)
Flash Song လုပ်ရင်သုံးဖို့ပုံများ (2)
Flash လုပ်တဲ့ဆော့ဝဲ Max 2-3-4 (3)
FlashSong လုပ်နည်းဆော့ဝဲများ (5)
Shwe Dream ဇာတ်လမ်းစုံ
<!- www.mssk.info start disable copy paste -->
18 နှစ်ပြည့်မှ Download ယူပါလို့လမ်းညွှန်ထားပါတယ် ဆော့ဝဲနာမည်က အချစ်နယ်ကျွံတဲ့
ဒီဆော့ဝဲလေးကတော့ Android ဖုန်းအတွက် Developer Ko Sai Maung ရေးထားတဲ့ ၁၈ နှစ်ပြည့်ပီးသူများအတွက် sex apk လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ အထဲမှာ...
မြန်မာပြည် ဖုန်းနံပတ်နဲ့ Facebook Account အသစ်ဖွင့်နည်း။
Facebook Account အသစ်ဖွင့်နည်းလေးကိုမသိသေးတဲ့သူမျာအတွက်ပြန်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် ဖုန်းနံပါတ်တောင်းရင်လဲမြန်မာပြည်ဖုန်းနံပါတ်သုံးပြီး ...
ဒီဟာလေးကတော့ ၁၈နှစ်အထက်မှ ကြည့်သင့်ပါတယ်(ဗဟုသုတ ယူထား)
မကြည့်ဖူးသေးသူ များမယ်ထင်ပါတယ် မိန်းကလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ယောက်ျားလေးပဲဆိုဆို သိထားကြည့်ထားသင့်တယ်ထင်လို့ ။ တချို့ ဆို သေတာသေသွားတာ အခုလြို...
ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ဒေါက်တာ နန္ဒမာလာဘိဝံသ၏ တရားတော်များ
တစ်နေရာထဲမှာ အကုန်ရနိုင်အောင် စုစည်းထားပါတယ် ဖုန်းနဲ့ ရော ကွန်ပျူတာနဲ့ ရော ကြိုက်နှစ်ရာ တရားကို တစ်ပုဒ်ချင်း ဒေါင်းနိုင်တယ် တရား...
ဘက်ထရီလည်းခံ လိုင်းလည်းမြန် ဖုန်းလိုင်းလည်းပိုမိုမိစေတဲ့ All in one ဆော့ဝဲ
Download - All in one booster for Android
ဖွေးဖွေး ချစ်သူများအတွက် ဖွေးဖွေးပုံ 270ကျော်ကို စုပေါင်းတင်ပေးပါတယ်
ဒါကတော့ ဖွေးဖွေး ချစ်သူများအတွက် သူနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပုံတွေကို စုစည်းပေးတာပါ ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး ဖွေးဖွေးပုံဆိုကူးထား သိမ်းထားလေ့ရှိတယ် ။ အဲ...
Android ဖုန်းဘက်ထရီ အကုန်မြန်သူများအတွက် 2ဆတိုးအောင်လုပ်နည်း
ဖုန်းမှာ ဘက်ထရီအကုန်မြန်နေသူများ ဒီဆော့ဝဲလေးကို ထည့်ထားလိုက်ပေတော့ လိုအပ်တာမှန်သမျှ ဒီဆော့ဝဲလေးက ချိန်ဆလုပ်ဆောင်သွားတာ အဆင်ပြေတယ် ...
နာမည်ကြီး ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ ဟိုတယ်အခန်းတွင်း မဖွယ်မရာ ဗီဒီယိုများအကြောင်း (ဖြစ်ရန်မှန်)
ဇာတ်လမ်းအစ ကတော့…. ဆီဒိုးနားသို့taxi လည်း ရောက်ခဲ့လေတော့ ကောင်တာကိုသွားပြီး ကောင်တာက ကောင်မလေးကတော့ အပြုံးများစွာနဲ့မိတ်ဆက်ပီး ID...
အခြေခံသမားတွေအတွက် Facebook အသုံးပြုနည်းကို ရှင်းထားတဲ့ စာအုပ်
Download - facebook ၏ လုပ်ဆောင်ချက်နဲ့အသုံးပြုနည်း ========================================== ဒီစာအုပ်လေးကတော့ အခုမှစသုံ...
Lock ကျနေသော Facebook အကောင့်အား Lock ပြန်ဖြည်နည်း
လုပ်ပုံ လုပ်နည်းကတော့ ပုံတွေကြည့်လိုက် တစ်ဆင့်ချင်းလုပ်ကြည့်ပါ Lock ကျရင် ပြန်ယူနည်းက 3မျိုးလောက် ရှိတယ် တစ်နည်းမရတစ်ခုစီ စမ်းလုပ်မယ...
နည်းပညာ စာအုပ်စုဆောင်းလိုသူများအတွက် တစ်နေရာထဲမှာ ၈၅ အုပ်ဒေါင်းလုပ်ယူနိုင်ပြီ
Download - နည်းပညာစာအုပ် ၈၅ အုပ်အစုံ
ကွန်ပျူတာ(လက်တော့)ပြုပြင်နည်း သင်ယူဖို့ စာအုပ်ဖတ်ချင်ရင်
ဒီမှာ Download ယူပါ Computer (လက်တော့) ပြုပြင်နည်း
Huawei Emotion UI ပါတဲ့ ဖုန်းများအတွက် ROOT မလိုတဲ့ Myanmar Font ထည့်နည်း
Huawei Emotion UI ပါတဲ့ ဖုန်းများအတွက် မြန်မာစာကို Root လုပ်ဖို့မလိုပဲ လွယ်ကူစွာ ထည့်သွင်းလို့ရ တဲ့ Myanmar Font apk လေးဖြစ်ပါတယ် G ...
Android ဖုန်းအားလုံးအတွက် မြန်မာစာမှန်ပြီး Version အားလုံးအဆင်ပြေတဲ့ Smart Zawgyi Pro.apk
ယခု Smart Zawgyi Pro (Android version) ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံက Smart Zawgyi Pro (Bat tool) နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ -Android version အားလုံးမှ...
ဦးသုမင်္ဂ ဟောကြားသော တရားတော် MP3 ဖိုင်များ ဒေါင်းလုပ်ယူချင်ရင်
၁။ ခန္ဓာငါးပါးသူသတ်ယောကျာင်္း ၁၇-၉-၂၀၀၄ မိဂဒါဝုန်၂။ အနုရာဓဥပမာပြ ဒိဌိဖြ...
Android ဖုန်းနဲ့ ကာရာအိုကေ သီချင်းဆိုချင်သူများအတွက် ဆော့ဝဲလ် ကောင်း
ဖုန်းသမားတွေ မေးထားကြလို့ ဒီဆော့ဝဲလ် လေးတင်ပေးလိုက်တာပါ။ ဆိုဒ်တွေမှာ လိုက်ရှာ ရင်း ဆော့ဝဲလ် လမ်းညွှန် ဆိုဒ်မှာ တင်ထားတာတွေ့တာနဲ့ စမ်...
အရပ်ပုလို့ ရှည်ချင်သူများ14ရက်အတွင်း အရပ်ရှည်နည်းလေ့ကျင့်ခန်းများ
တကယ်ထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်းမလို့ ဒီစာအုပ်အတိုင်း 9တန်း 10 တန်းနှစ် ဂျပုလို့ အခေါ်ခံရထဲက လေ့ကျင့်ဖူးတာ တကယ်အောင်မြင်ပါတယ် ဒီထဲမှာ အရပ်ရှည်ခ...
မောင်(စွယ်စုံကျမ်း) ၀က်ဆိုဒ် - Mssk.apk ကို Play Store Market မှာ Download ယူနိုင်ပြီ
MSSK.apk ဟာ မောင်(စွယ်စုံကျမ်း) နည်းပညာ ၀က်ဆိုဒ်ကို Android ဖုန်းထဲကနေ အလွယ်တကူ လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်အောင် ရေးဆွဲထားတဲ့ Application...
စာရေးဆရာ မင်းလူ၏ စာအုပ်များ ဖတ်ချင်ရင် တစ်ခါ Download ယူရုံနဲ့ 43 အုပ်ရပါပြီ
စုဆောင်းထားတဲ့ စာအုပ်တွေ တစ်အုပ်ချင်းမတင်တော့ပဲ စုစုတင်လိုက်ပါတယ် လိုအပ်နေသူများ စာအုပ်ဝယ်၇န်အဆင်မပြေသူများ ငှားရမလွယ်နေရာဝေးသူ စုဆေ...
*M.H.A* ရေးသော ကဗျာတိုများ ၀က်ခြံပျောက်ဆေး ၀တ္ထုတိုပေါင်ချုပ်စာအုပ်များ ၀သောသူများအတွက်ဝိတ်ချနည်း 18 နှစ်ပြည့်မှဖတ်ရန် 18 နှစ်ပြည့်သူများသာ 18+ ဆော့ဝဲများ 3D ဆော့ဝဲများ Account ပြဿနာများ Account ကို အပြီးဖျက်နည်း Accounting ဆော့ဝဲများ Adobe Illustrator All in One Apk Andriod Error Solution Android App ဆော့ဝဲ ရေးသားနည်း Android Application Android Camera APK Android Phone အတွက် Screen Recorder Android Phone အတွက် မွန်ဖောင့်များ Android Phone အတွက် မြန်မာဖောင့် Android Phone အတွက် မြန်မာဖောင့် Android phone နှင့်Computer Internet ချိ်တ်နည်း Android နည်းပညာများ Android ဖုန်း မြန်မာစာထည့်နည်း Android ဖုန်းမှာ ရှိသင့်တဲ့ App များ Android ဖုန်းမှာ ရှိသင့်တဲ့ဆော့ဝဲ Android ဖုန်းမှာ ရှိသင့်တဲ့ဆော့ဝဲ Android ဖုန်းအတွက် Auto Answer ဆော့ဝဲ Android ဖုန်းအတွက် download Android ဖုန်းအတွက် Keyboard Android ဖုန်းအတွက် Reader Android ဖုန်းအတွက်မြန်မာ့ ဂိမ်း Android ပြုပြင်နည်းစာအုပ်များ Android အတွက် Google Earth Android အလန်းဇယား Launcher APK ဆော့ဝဲပုံများ ကွန်ပျူတာဖြင့်မြင်ရန် Apple ( iTunes )ID ဖွင့်နည်း Apple ID ပြဿ နာဖြေရှင်းနည်း Autocad စာအုပ် Backup APK Battery Saver Apk Blog Setting ပြင်နည်းများ Car Game Cinthi ရေးသော ကဗျာများ Computer ၀ယ် လျှင် ဖတ်ရန် Computer Cleaner ဆော့ဝဲများ Computer Error ဖြေရှင်းနည်း Computer Webcam ဆော့ဝဲ Computer Window တင်နည်းများ Computer ထဲမှာရှိနေသင့်တဲ့ဆော့ဝဲ Computer ထဲမှာရှိနေသင့်တဲ့ဆော့ဝဲ Computer မှာ Copy မြန်တဲ့ဆော့ဝဲ Computer မှာ ပုံရိုက်တဲ့ဆော့ဝဲ Computer မှာသုံးဖို့ အဘိဓာန် Computer အတွက် Player စုံ Computer အတွက် Android Manager Computer အတွက် Anti Virus Computer အတွက် Anti Virus ဆော့ဝဲများ Computer အတွက် Converter ဆော့ဝဲ Computer အတွက် Games Computer အတွက် Google Earth Computer အတွက် Recovery ဆော့ဝဲ Computer အတွက် Screen Recoder Computer အတွက် Speaking ဆော့ဝဲ Computer အတွက် Uninstaller Computer အတွက် Video Editor Computer အတွက် ပြက္ခဒိန် နဲ့ နာရီ Computer အတွက် အသံဖမ်းဆော့ဝဲ Computer အလှဆင်နည်းဆော့ဝဲ Computerမှာ သိထားရမယ့် အချက်များ Computerမှာသိသင့်သောပညာများ Computerမှာသိသင့်သောပညာများ Computerပြုပြင်ရေးနည်းလမ်းစာအုပ် Computerလေးနေတာကိုမြန်ချင်ရင် Cracking နည်းပညာ Cydia Sources Cydia Tweaks Cyper Link Power Director Design ဆွဲတဲ့ ဆော့ဝဲများ Domainဆိုင်ရာပြဿနာများ Download Software Download Software နဲ့လုပ်နည်း Driver အကြောင်းနဲ့Driver များ Electrical ပိုင်းဆိုင်ရာ စာအုပ်များ Excel Password ပြန်ရှာနည်း Facebook Block လုပ်နည်း၊ ဖြုတ်နည်း Facebook နာမည် မြန်မာလိုပြောင်းနည်း Facebook Chat Message အကုန်ဖျက်နည်း Facebook Hacking Facebook Lock ဖြည်နည်း Facebook ဆိုင်ရာ နည်းပညာများ Facebook ဆိုင်ရာ ဆော့ဝဲများ Down ရန် Facebook နည်းပညာစာအုပ် Facebook ရဲ့ သတင်းထူး Facebook သို့ Auto ပိုစ်တင်နည်း Facebook အကောင့် ဖွင့်နည်း Fan Page လုပ်နည်း File Explorer Firmware တင်နည်း Firmware မျိူးစုံ Download Flash Song လုပ်နည်းစာအုပ် Flash Song လုပ်နည်းနဲ့ဆော့ဝဲများ Flash Song လုပ်ရင်သုံးဖို့ပုံများ Flash လုပ်တဲ့ဆော့ဝဲ Max 2-3-4 FlashSong လုပ်နည်းဆော့ဝဲများ Folder များကိုသော့ခတ်သိမ်းနည်း Friend List ဖျောက်ထားနည်း Funny Talk apk Gmail Hacking ပညာ Gmail အကောင့်ပြုလုပ်နည်း Google Chrome ဆိုင်ရာပညာ GoogleEarthဖြင့်ကမ္ဘာပတ်ကြည့်မယ် Graphic ဒီဇိုင်း စာအုပ်များ Hacking နည်းပညာများ HIV-AIDS အတွက်ဆေးနည်း Huawei ဖုန်းအတွက်နည်းပညာများ Huawei မြန်မာစာထည့်နည်း i-Phone ၀ယ်မည့်သူဖတ်ရန် i-Phone Reset ပြုလုပ်နည်း i-Phone ကနေ Wifi ထပ်ဆင့်လွှင့်နည်း i-Phone ကနေDownload ယူနည်း i-Phone ဆိုင်ရာ စာအုပ်များ i-Phone ထဲ Rington ထည့်နည်း i-Phone ထဲ သီချင်းသွင်းနည်း i-Phone မှာ Backup ယူနည်း i-Phone မြန်မာစာထည့်နည်း i-Phone အတွက် ID ဖွင့်နည်း i-Phone အတွက် Screen Recorder i-Phone အတွက် Slide Show Maker i-Phone အတုအစစ် စစ်ဆေးနည်း i-Phone အခြေခံပညာများ Internet Download Manager iOs Devices များ Version မြှင့်နည်းများ iOs Firmware များ Download ယူနည်း IP location Hider iPhone Carrier နာမည်ပြောင်းနည်း iPhone Jailbreak လုပ်နည်းများ iPhone Pdf စာအုပ်များ Down နည်း iPhone ထဲမှာ ရှိသင့်တဲ့ဆော့ဝဲများ iPhone အတွက် Games ဆော့ဝဲများ iPhone အတွက် Photoshop များ iPhone အတွက် Ringtones ဖြတ်နည်း Iphone အတွက် စာအုပ်ဒေါင်းနည်း iPhone အတွက် တရားဓမ္မဆိုင်ရာ ဆော့ဝဲများ iPhone အတွက် ပြက္ခဒိန်ဆော့ဝဲများ iPhone အတွက် အဘိဓာန် ဆော့ဝဲများ Jailbreak ပြုလုပ်နည်းသိချင်ရင် Karoake သီချင်းဆိုတဲ့ဆော့ဝဲ Key Logger Lenovo ဖုန်း Root လုပ်နည်း Lenovo ဖုန်း မြန်မာစာ ထည့်နည်း Lock ကျသောအကောင့်ပြန်ယူနည်း Lock မကျအောင် သုံးနည်း MAYKO ရေးတဲ့ ကဗျာများ Miscrosof Office ဆိုင်ရာစာအုပ် Miscrosoft Office ဆော့ဝဲများ Download ယူရန် Mozilla Firefox ဆိုင်ရာပညာ MP3 တရားတော်များ Mp3/Mp4 စွယ်စုံ Converter ဆော့ဝဲ MP3/MP4ပြောင်းတတ်ချင်ရင် Nero 8 ၏ အသုံးဝင်မှု Networking ဆိုင်ရာစာအုပ် Nokia ဖုန်း မြန်မာစာ ထည့်နည်း Office Apk Online TV Player Online Webcam Pattern Lock ပြဿ နာဖြေရှင်းနည်း pc viber myanmar font PDF Book Creater PDF Book Reader Phone Battery ပြဿနာ Phone ကနေ Download ယူနည်း Phone ထဲက ဖိုင်များ သောခတ်နည်း Phone ထဲကနေ MP3-4ပြောင်းနည်း Phone နဲ့ သက်ဆိုင်သော Phone မှ Wifi ကို ခွဲသုံးနည်း Phone မှာ Error တက်လျှင်ဖြေရှင်နည်း Phone မှာ Snapshot ရိုက်နည်း Phone မှာ ရှိနေသင့်တဲ့ဆော့ဝဲ Phone မျိုးစုံအတွက် Games Phone မျိုးအတွက် Firmware တင်နည်း Phone မျိူးစုံအတွက် Root လုပ်နည်း Phone ပြုပြင်နည်းစာအုပ်များ Phone အင်တာနက်လိုင်း မြင့်နည်း Phone အင်တာနက်လိုင်း လျှောက်နည်း Phone အတွက် Anti Virus Phone အတွက် Bank ဆော့ဝဲ Phone အတွက် Call Blocker Phone အတွက် Cleaner Phone အတွက် Facebook Phone အတွက် Keyboard Phone အတွက် Mobile Browser Phone အတွက် Photoshop ဆော့ဝဲ Phone အတွက် Player Phone အတွက် Speaker apk Phone အတွက် TeamViewer Phone အတွက် Video Call ဆော့ဝဲများ Phone အတွက် Video Editor Phone အတွက် Virus ဆော့ဝဲ Phone အတွက် Wallpaper Phone အတွက် Win Rar Phone အတွက် တိုင်းရင်းသား Font နဲ့ ကီးဘုတ်များ Phone အတွက် ပန်းချီရေးဆွဲနည်း Phone အတွက် မြန်မာပြက္ခဒိန် Phone အတွက် မြန်မာလိုဆော့ဝဲ Phone အတွက် ဟာသ ဆော့ဝဲ Phone အတွက် အသံဖမ်းဆော့ဝဲ Phone အတွက် အကောင်းဆုံး Camrea Phone အတွက် ဗေဒင်ဆော့ဝဲ Phone အတွက် နှစ်ကိုယ်ခွဲဆော့ဝဲ Phone အတွက်မြန်မာအဘိဓာန် Phone အတွက်မြန်မာဖောင့် Phone အမျိုးမျိုး Root လုပ်နည်း Phone အလန်းဇယား Rington Phone လေးလာရင်မြန်စေဖို့Photo Editor Photo Slideshow Maker Apk Photo Slideshow လုပ်နည်း Photo ဒီဇိုင်းပြင်ချင်ရင် Photoshop Tutorial များ Photoshop ဆိုင်ရာ စာအုပ်များ Photoshop နှင်ဒီဇိုင်းပညာများ Photoshopဆိုင်ရာ ဆော့ဝဲများ Popular လူဆော့အများဆုံး Phone Games များ Printer Driver Printer ပြဿနာများ Programming ဆိုင်ရာစာအုပ် Programming ပညာရပ်များ Registery ပြသနာ နဲ့ ဆော့ဝဲများ Root ပြီးသားဖုန်း Un-Root ပြုလုပ်နည်း Root လုပ်နည်း Safari မှာ မြန်မာစာထည့်နည်း Screen Recoder Security Software Sniper သေနပ်ပစ် Games များ Softwere install ပြဿနာများ Speaking စာအုပ်များ Speed Up Internet Team Viewer Template ဒီဇိုင်းလှလှများ Typing Software USB STICK LOCKER Useful Apk VCD-DVD Label Maker VCD-DVD-Burning ဆော့ဝဲများ Viber နဲ့ ဆိုင်သော ပညာများ Video Editor Videoတည်းဖြတ်မှုပညာ Virtual Software Virus ၀င်လျှင် ဖြေရှင်းနည်း Website နဲ့Blog နည်းပညာများ Website အညွှန်း Wifi Hacking နည်းလမ်းစာအုပ် win Rar ၏အသုံးဝင်မှုများ Win Rar 32bit and 64 bit Window7၏ အားသာချက် Window 8 ဆိုင်ရာ Window Desktop Gadges Window Genuine ဖြေရှင်းရန် Window Loader Window တင်ချင်သူများ Down ရန် Window များ Active ဖြစ်အောင်လုပ်နည်း Winrar ပတ်စ၀ပ်ပြန်ဖြုတ်နည်း Youtube မှ Download ယူနည်း Zalo App ဆော့ဝဲပိုင်းဆိုင်ရာများ ဖတ်ရန် Zawgyi Font ပြဿနာဖြေရှင်းရန် ကင်ဆာ ကုသနည်း ကွန်ပျူတာပြုပြင်နည်း စာအုပ် ကွန်ပျူတာအတွက်မြန်မာဖောင့်များ ကာတွန်းစာအုပ်များ ကာတွန်းဦးဖေသိန်း ကာယဗလ လေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်များ ကိုယ့် Profile ဘယ်သူအကြည့်များလဲစစ်နည်း ကျန်းမာရေး ကျန်းမာရေး ဆောင်းပါးများ ကျီးပေါင်းရောဂါ အကြောင်း ခင်ခင်ထူး ခံတွင်းနံ့ ပျောက်ဆေး ခရီးသွား ခရီးသွား သတိပြုကျန်းမာရေး ခရုသင်းရောဂါ ခွန်အားရှိသောရသစာပေများ ခါးနာ ပျောက်ဆေးနည်း ချက်နည်းပြုတ်နည်း ချက်ပြုတ်နည်း နဲ့ မုန့် လုပ်နည်း ချစ်စံဝင်း ချစ်မှုရေးရာဖတ်စရာ ချစ်ဦးညို ချစ်နိုင်(စိတ်ပညာ) ဂမ္ဘီရ၀တ္ထုများလိုချင်ရင် ဂီတာတီးခတ်နည်းစာအုပ် ဂီတလောက သီတင်းများ ဂျာနယ်ကျော်မမလေး ဂျူးငှက်ဖျား ကုသနည်း ငါးမျက်စိရောဂါ ကုသနည်း စွယ်စုံ Games အမျိုးမျိုး စွယ်စုံ အထွေထွေ ဗဟုသုတ စွယ်စုံကဗျာ စွယ်စုံသတင်းထူး စွယ်စုံဟာသ စာစီစာရိုက်လက်ကွက်ကျင့်နည်း စာစီစာရိုက်နှင့် Miscrosoft Office စာရင်းကိုင်နည်း စာအုပ် စာပေဟောပြောပွဲများ စာရေးဆရာများ၏အတ္တုပတ္တိ စိတ်ကျရောဂါအကြောင်း စိတ်အားတက်ကြွစေသော နှလုံးသားအဟာရစာပေများ စိမ့်(ပညာရေး) စိမ့်စိမ့်(တောင်ကြီး)ရဲ့ကဗျာများ စိုက်ပျိုးနည်း စာအုပ်များ စိုးမြတ်သူဇာ စီးပွားရေး ဗဟုသုတ ဆောင်းပါးများ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်အမှတ်တရများ စက္ကောမ ဆန်းလွင် ဆံပင်ကောင်းအောင်ပြုလုပ်နည်း ဆရာပါရဂူ ဆားဝက်ခြံကုသနည်း ဆိုင်ကယ် မောင်းပြိုင်ပွဲ Games ဆီးချိူရောဂါ ကုသနည်း ဆီးကျောက် ကုသနည်း ဆုမြတ်မွန်မွန် ဆူးသခင်၏ကဗျာများ ညှင်းပျောက်ဆေးနည်း ညိုမြ ညီညီ(မြန်အောင်)၏ကဗျာများ တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် တက္ကသိုလ်စိန်တင် တက်တိုး တင်းတိတ်ပျောက်ဆေး တင်ထွေး တင်နိုင်တိုး တပင်ရွှေထီး တရားစာအုပ်များ တရားဓမ္မစာပေဆိုင်ရာများ တွတ်ပီ(ဓနုဖြူဆွေမင်း) တာရာမင်းဝေ တုတ်ကွေးဖျားနာအကြောင်း ဒဂုန်တာယာ ဒူးနာပျောက်ဆေး ဒဿကျော်စွာ ဓာတ်ပုံ ပြင်ဖို့Frame ဒီဇိုင်းများ ဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးရေးပညာများ ဓာတ်ပုံကို အရှင်ဖြစ်အောင်လုပ်နည်း ဓာတ်ပုံကို ခေါင်းဖြတ်ဆက်တဲ့ဆော့ဝဲ ဓာတ်ပုံပေါ် မြန်မာစာရေးချင်ရင် နည်းပညာ စာအုပ်များ နည်းပညာ ဆိုင်ရာ Video များ နတ်သျှင်နောင် နတ်နွယ် နားကိုက်ဝေဒနာအတွက် နီကိုရဲ ပညာပေး ရသစာပေများ ပါချုပ်ဆရာတော် ပိတ်ထားသောwebsiteရှောင်ဖွင့်နည်; ပိန်ချင်သူများ ၀ိတ်ချနည်း ပိုတိုရှော့ပုံများ ပီမိုးနင်း ပုညခင် ပုံရိပ်ယောင်ရေးတဲ့ ကဗျာများ ပုသိမ်သား ၏ ကဗျာများ ဖတ်စေချင်တဲ့စာအုပ်တွေ ဖားအောက်တောရဆရာတော် ဖိတ်စာ၊လိပ်စာ ဒီဇိုင်းကဒ်လုပ်နည်း ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပျုတာ Wifi ချိတ်နည်း ဖုန်းအင်တာနက်လိုင်းမြင့်ရန် ဖျာပုံနဒီ ကြည်အေး ကြွက်နို့ ပျောက်ဆေး ကြီးပွားရေးလမ်းညွှန် ဗန်းမော်ဆရာတော် ဗိုက်အဆီချနည်းလမ်းများ ဗိုက်အောင့် ပျောက်ဆေး ဗိုက်အောင့်လျှင်သတိ ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ရေးနဲ့Anti Virus ဗုဒ္ဓ တရား ဓမ္မဆိုင်ရာ ဆော့ဝဲများ ဗျူး ဘဒ္ဒန္တက္ကန ဘဒ္ဒန္တကောသလ္လ ဘာသာစကားလေ့လာရန် ဘာသာပြန်စာအုပ်များ ဘီပိုး-စီပိုး ပျောက်ဆေးနည်း ဘုရင့်နောင် ဘလော့ ပြဿနာများ ဘလော့ လုံခြုရေးနည်းလမ်း ဘလော့ခရီးသည်ကဗျာများ ဘလော့တစ်ခုပြုလုပ်နည်း ဘလော့မှာ Like Box ထည့်နည်း ဘလော့အလှဆင်နည်းနဲ့wedgets မင်္ဂလာဆောင်အတွက်သတိထားသင့်သည်များ မင်းခိုက်စိုးစံ မင်းဒင် မင်းမြတ်သူရ မင်းလူ မင်းသိင်္ခ မမမေ (စစ်တွေ) ရေးတဲ့ကဗျာများ မှားဖျက်တာပြန်ရှာဖို့ Data Recovery မှဲ့ ခြောက်ပျောက်ဆေး မဟာစည်ဆရာတော် မိန်နွေ ရေးတဲ့ကဗျာများ မိုးကုတ်ဆရာတော် မိုးတိမ် မျက်နှာကိုအသေးစိတ်လှအောင်ပြင်ဖို့မျက်နှာဖြူဖွေးစေသောနည်းလမ်းများ မျက်နှာပေါင်းတင်နည်းလမ်းများ မျက်စေ့ဝေဒနာသက်သာဖို့မျက်နှာဖြူဖွေးလှပစေသောနည်းလမ်းများ မျိုးဆက်သစ် အလှုပြုလုပ်မှုမှတ်တမ်း မျိုးဆက်သစ်၏ တတိယအကြိမ်အလှု မှုခင်းသတင်းများ ပြက္ခဒိန်ဒီဇိုင်းနှင့် ပိုစ်ကတ်လုပ်နည်း ပြက္ခဒိန်ဒီဇိုင်းနှင့် ပိုစ်ကတ်လုပ်နည်း ပြည်တွင်းသတင်း ပြည်တွင်းသတင်းများ မြတ်ခိုင် မြန်မာ့ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ မြန်မာဖုန်းနှင့် Facebook ဖွင့်နည်း မြန်မာဘာသာနဲ့ မြန်မာ Games မြန်မာဘုရင်မင်းဆက်များ မြန်မာပြည်အနှံ့ ခရီးသွားလမ်းညွှန် မြန်မာ့ရိုးရာတိုင်းရင်းဆေး မြန်မာ့သမိုင်းရာဇ၀င်များ မြန်မာ့သိုင်းလေ့ကျင့်နည်းစာအုပ်များ မြန်မာဖောင့်မမှန်ရင် ဖြေရှင်းနည်း မြသန်းတင့် ရင်ထဲထိတဲ့ သူတို့ ကဗျာ ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း ရင်သားကင်ဆာ ဆေးနည်း ရစ်မမ(နေပြည်တော်)၏ကဗျာများ ရုပ်သံ ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်နည်းစာအုပ် ရဝေသစ်(မြတမာ)၏ ကဗျာများ ရဲကောင်းထက် လက်ဝှေ့ ထိုးနည်းစာအုပ် လင်းယုန်မောင်မောင် လည်ချောင်းကင်ဆာ ဆေးနည်း လယ်တီဆရာတော် လွမ်းဝေအောင် ရေးတဲ့ ကဗျာ လိပ်စာ Name ကဒ်လုပ်နည်း လိပ်ခေါင်းရောဂါဆေးနည်း လူထုဒေါ်အမာ သခင်မြတ်ဆိုင် သံဃာတော်များ၏ထေရုပ္ပတ္တိ သတိုးတေဇ သန်းဝင်းလှိုင် သင်္ကြန်သီချင်းများ စုစည်းမှု သဘာဝအားတိုးဆေးများ သမိုင်းဆိုင်ရာ စာအုပ်များ သရဲ တစ္ဆေ ဖြစ်ရပ်ဆန်းများ သရဲအကြောင်းဖတ်ချင်ရင် သွားကိုက်ပျောက်စေသောဆေးနည်းများ သွားကိုက်ပျောက်ဆေးများ သွားဖုံးရောဂါအတွက်ဆေး သာယာဝတီ ကျောင်းစီမံကိန်း သားအိမ်ကင်ဆာကုသနည်း သိပ္ပံမောင်ဝ သိုက်ကြီး( က.ပ.တ )၏ကဗျာများ သိစေချင်ကြည့်စေချင်တဲ့ဗီဒီယို သိသော်ဖော်သွား မသိသူကြော်စား သီချင်းစီးရီးတစ်ခုလုံး Down ရန် သုတရသစာအုပ်စုံDownloadယူရန် ဟာသ ဟာသစာအုပ်များ အင်တာနက်ပြဿ နာ ဖြေရှင်းနည်း အင်တာနက်ပေါ်မှာ ငွေရှာနည်းများ အစာ အိမ် ရောဂါ အဆုတ် တီဘီပျောက်ဆေး အဆုတ်ကင်ဆာ ဆေးနည်း အတ္တကျော် အတ္ထုပ္ပတ္တိစာအုပ်များ အပူကန်အနာအတွက်ဆေးနည်း အကြည်တော် အကြိုက်ဆုံး မြန်မာဇာတ်ကား အကြိုက်ဆုံး နိုင်ငံခြားက အမှတ်တရနေ့ ထူးများ အမာရွတ် ပျောက်ဆေးနည်း အမျိူးသမီးများဖတ်ဖို့အမျိူးသမီးရေးရာသိမှတ်စရာ အရှင်ဆန္ဒာဓိက အရှင်ဆေကိန္ဒ အွန်လိုင်းငွေရှာနည်းစာအုပ်များ အလန်းဇယား PhotoShop ဒီဇိုင်း အလှအပ အလှအပဆိုင်ရာ နည်းလမ်း အလှု မှတ်တမ်းတင်ပုံများ အသည်း C ပိုး B ပိုး ပျောက်ဆေးနည်း အသည်းခြောက် ဆေးနည်း အသဲကင်ဆာ ကုသနည်း အားကစား အားကစားဆိုင်ရာ Games အိပ်မပျော်သူအတွက်ဆေးနည်း အိပ်ရေးပျက်ခြင်းအကြောင်း အိမ်ထောင်ရေး အိအိကျော်ဇင် ရေးတဲ့ ကဗျာများ အူမကြီး ကင်ဆာပျောက်ဆေး အူအတက်ရောင် အတွက်ဆေး အထွေထွေဗဟုသုတ အခြေခံကွန်ပျုတာပြုပြင်နည်း အနုပညာ အနုပညာရှင်များ၏ဖလမ်းဖလမ်းပုံ အနုပညာလောက သတင်းများ ဥပဒေဆိုင်ရာစာအုပ် ဦးကုလား ဦးခင်အောင် ဦးဘဂျမ်း ဦးသုမင်္ဂလ ဦးဥတ္တမသာရ ဦးဥာဏိဿ ရ ဦးကျော်ဇေယျ ဦးဇောတိက ဦးသေားင်းလွင်(ဘီအေ) ဦးနု ဝေဘူဆရာတော် ကောင်းထက် ကျောက်ကပ်ရောဂါကုနည်း ကျော်ငြိမ်း ကျော်သူ ချွေးနံပျောက်ဆေးနည်း ခေါင်းလျှော်သူများ သတိထားရန် ဆေးပညာဆိုင်ရာ စာအုပ် ဆောင်းပါး တောင်ငူခေတ်တိုက်ပွဲများအကြောင်း တော်ဘုရားလေးအောင်ဇေ တေးတေး ရေးတဲ့ကဗျာ နေလင်း(အ.က.သ) ပွေးဝဲ အတွက်ဆေးနည်း ဖေမြင့် ဖွေးဖွေး ကြောက်တတ်သူများမဖတ်ရ ဗေဒင် ဗေဒင်အကြောင်းသိကောင်းစရာများ မောင် ရေးတဲ့ကဗျာ များ မောင်(စွယ်စုံကျမ်း) လမ်းညွှန် မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း) မောင်ညိုမှိုင်း(သံလျင်) မောင်ထွန်းသူ မောင်လှမျိုး(ချင်းချောင်းခြံ) မောင်သန်းဆွေ(ထားဝယ်) မောင်ပေါ်ထွန်း မောင်သော်က ခြေဖနှေင့်ကွဲပျောက်ဆေးနည်း ရွှေဥဒေါင်း ရွှေတောင်ကုန်းဆရာတော် လေးဘက်နာ ပျောက်ဆေး လေဖြတ်ပျောက်ဆေး လေလွင့်လူ၏ ကဗျာများ သွေးဝမ်းသွားသူအတွက်ဆေး သွေးကင်ဆာကုနည်း သွေးချိုရောဂါကုသနည်း သွေးတိုးကျဆေးနည်း သွေးလွန်း တုပ်ကွေး ရောဂါ သွေးကြောထုံးပျောက်ဆေး အောင်ခင်စိုး အောင်မှုးဝေ၏ကဗျာများ အောင်မြင်ကျော်ကြားသူများအကြောင်း အောင်မြင်ရေးစာစုများ အောင်ရင်ငြိမ်း နှလုံး သွေးကြောကျဉ်းရောဂါပျောက်ဆေး နှလုံးရောဂါအတွက် ဆေးနည်းများ နိုင်ငံတကာသတင်း နိုင်ငံခြားဇာတ်ကားများ Down ချင်ရင် နိုင်ငံရေးဖြစ်ရပ်မှန်စာအုပ်
Copyright @2015 www.mssk.info,Designed by မောင်(စွယ်စုံကျမ်း). Powered by Blogger.
ဒီဝက်ဆိုဒ်မှာအသစ်တင်တိုင်း FB ကနေ ဖတ်နိုင်ရန် အောက်တွင် Like ကို နှိပ်ထားပါ။ Like ပေါ်တွင် အမှန်ခြစ်ရှိနေပါက ထပ်နှိပ်စရာမလိုပါ။ × ဖုန်းထဲကိုထည့်ဖို့ မောင်(စွယ်စုံကျမ်း) ၀က်ဆိုဒ်၏ MSSK Apk Download Click Here